Moa ve fitaovana fikarohana momba ny fikarohana ho an'ny mpivarotra Amazon no tena ilaina ho an'ny lisitry ny vokatrao manokana?
Raha ny marina, ny sehatra orinasam-pandraharahana rehetra na ny orinasam-pandefasana entana (toy ny Amazonia, ary eBay, Alibaba, Walmart, sns.) dia toa ny fitaovam-pitaterana voalohany amin'ny natiora. Midika izany fa ny tetikady fanatsarana votoatim-potoana marina dia ampahany tsy azo ivalozana amin'ny fahombiazan'ny varotra isan-karazany any. Amin'izany fomba izany, ny fikarohana lalindalina fanta-daza sy ny lalam-pandinihana dia tena manasongadina ny tsipika misy eo amin'ny tetikasa an-tserasera sy ny tsy fahombiazan'ny orinasa - vps hosting de. Ary midika izany fa ny fampiasana fitaovana fikarohana sokajy tsara natao ho an'ny mpivarotra Amazon dia nanjary tena ilaina - ilaina fotsiny mba ho tafavoaka velona ao anatin'io sehatr'asa matihanina amin'ny tsenam-barotra marina io - fa tsy karazan-karama toy ny mety eritreretinao. Noho izany, etsy ambany dia hasehoko anao ireo fitaovana maoderina tsara ho an'ny Amazon mpivarotra.
Izy ireo dia mpanampy an-tserasera sy azo itokisana amin'ny aterineto izay notsapahiko tamin'ny lisitra vokariko manokana tao amin'io toeram-pivarotana be mpividy io - mahatsapa fatratra farafaharatsiny mba hanandrana ireto manaraka ireto: 1)
Google Plane Keyword Planner
Tsy mahagaga, ity fikarohana tsotsotra fototra ity sy ny tolotra adiresy imasom-pahefana dia fitaovana mahery vaika fampiasa amin'ny fampiasana ny liona amin'ny SEO. Mazava ho azy, ny Google Keyword Planer dia tsy anisan'ireo fitaovana manokana natao ho an'ny mpivarotra Amazon. Na dia izany aza, raha ny fikarohana sy ny fahatakarana ny vokatra fototra momba ny vokatra fototra - ny fitaovana Keyword Planner dia izay mety hanome anao fiandohana tsara hanombohana, miaraka amin'ny fampisehoana anao sary lehibe momba ny teny fanalahidy mety sy mahasoa. Raha ny tsara indrindra, raha toa ka manitsy ny lala-mahitsy izy ireo, dia tokony ho lasa lohahevitra fototra tianao izy ireo hizarazara ny fifamoivoizana momba ny fikarohana amin'ny alàlan'ny lisitry ny vokatra Amazon, ary noho izany dia mamaritra ny fahafahanao manararaotra ny raharaham-barotra ankapobeny.
Raha fantatrao ny teny fototra mahasoa indrindra sy ny fandrindrana ny vokatra azo avy amin'ny famolavolana finday, dia azo antoka fa ny Seller Prime no hita fitaovana tsara indrindra ho an'ny mpivarotra Amazon. Tena tsotra izao ny zava-drehetra. Ary ny zavatra rehetra ilainao dia ny hampiditra ny anarana amin'ny vokatra na ny isa mitovy amin'ny ASIN ny Amazon - ary vita ianao, manana lisitry ny soso-kevitra sarobidy sarobidy izay nomanina ho anao tsy ho ela.
Safidy tsara hafa koa ny fikarohana ny fikarohana sy ny fanatsarana ny lisitra amin'ny Amazon. Ny AMZ Insight dia fitaovana maro natao ho an'ny mpivarotra Amazon, mba ho marim-pototra kokoa. Izany no mahatonga an'ity "toolkit" ity dia afaka manampy anao tsy amin'ny alalàn'ny tsikombakomba amin'ny fifaninanana sy ny soso-kevitra ankapobeny, fa amin'ny fametrahana ireo loham-pikarohana fikarohana goavana, manombatombana ireo volavolan-draketrany, mamehy ny isan'ireo vokatra mifandraika izay efa voasokajy ho tenimiafina iray, manombatombana ny habetsaky ny fifaninanana tenimiafina amin'izao fotoana izao, ny doka CPC ary mihoatra.